Global Voices teny Malagasy » Nitifitra Ranon-tsakay Tamin’ireo Mpampianatra Mpanao Fihetsiketsehana Ao Bangladesh Ny Polisy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Janoary 2013 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Pantha Rahman Reza, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Vao voalohany teo amin'ny tantaran'i Bangladesh, no nampiasa tifitra ranon-tsakay  ny polisy mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana. Mpampianatra sy mpiasa an-jatony avy amin'ireo sekoly tsy miankina no voatifitr'izany. Nanao fihetsiketsetahana izy ireo ary nitaky mba hahazo fanampiana Fandoavam-bola Isam-bolana (MPO) avy amin'ny governemanta ny sekolin'izy ireo. Nitatitra ilay bilaogera Amrito Shudha  fa mpampianatra iray antsoina hoe Sekandar Ali, no namoy ny ainy noho ny tifitra ranon-tsakay.
Taty aoriana, nampiasaina tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny ankavia izay nanohitra ny fiakaran'ny vidin-tsolika ihany koa ny fitifirana ranon-tsakay.
Niteraka adihevitra mafana tao Bangladesh ny fampiasana tifitra ranon-tsakay. Nanakiana ny fanapahan-kevitry ny governemanta amin'ny fampiasana izany ireo mpanao politika, mpikirakira ny fampahalalam-baovao, fiarahamonim-pirenena, mpiserasera ary olo-tsotra.
Polisy mampiasa tifitra sakay hanakanana ny hetsika ataon'ny mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina. Sary avy amin'i Rehman Asad. Copyright Demotrix. (8/1/2013)
Tao amin'ny bilaogin'i Sachalayatan blog [bn] Mehedi Hasan Khan  nanazava ny fampiasana “tifitra rano-tsakay” any amin'ny firenen-kafa, ny voka-dratsin'izany sy ny tokony handraràna izany.
Bilaogera Dikdarshan  nanoratra [bn] tao amin'ny somewhereinblog:
Mila mahafantatra ireo antoko politika rehetra fa tokony hitandrina izy ireo mba tsy hamela ny kolontsaina sy fomba herisetra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana; raha tsy izany izy ireo ihany no ifoteran'izany any aoriana any.
Bilaogera Tawhid  niantso ho amin'ny fandraràna izany tifitra ranon-tsakay izany [bn]:
Tsy azoko mihitsy hoe fa nahoana ny governemanta no mihevitra fa hevitra tsara ny manafatra tifitra sakay. Tokony raràna amin'ny fihetsiketsehana demokratika ny fampiasana ity rano mampidi-doza ity.
Alor sandhane  naneho [bn] ny ahiahiny momba ny fandraràna ny tifitra ranon-tsakay:
Ahoana ny fomba handraràna izany araka ny lalàna? Satria ireo manampahefana tokony hampihatra ny fandraràna no tena mpampiasa izany indrindra matetika.
Bilaogera, mpikatroka Kallol Mustafa  nanoratra [bn] tamin'ny Facebook:
Toa tahaka ny manambana ady shimika amin'ny vahoaka ny governemanta amin'ny fampiasana ity ranon-tsakay ity amin'ny fihetsiketsehana demokratika. Firy ny olona tokony ho faty na ho jamba alohan'ny hiafaran'ity ady ity?
Shapnocharini  nanamarika tamim-pivazivaziana [bn] momba izany tao amin'ny twitter:
@shapnocharini:  Ratsy ho an'ny fahasalamana ny vovon-tsakay tafahoatra. Angamba noho izany indrindra no antony nampiasan'ny Minisitry ny Atitany izany ho fitaovam-piadiana.
Ali Asif Shawon  [bn] nilaza mitovy izany ihany koa tao amin'ny Twitter:
@orkasif:  Feno fitiavana sy tifitra sakay ny rivotra. Tsara ny manao sarontava (maska).
Aho  nanasongadina [bn] zavatra tsara vitsivitsy momba ny fampiasana ny tifitra ranon-tsakay:
Raha nisafidy kobay fa tsy tifitra ranon-tsakay atoraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy, mety naratra mafy na maty mihitsy ny sasany tamin'ireo mpampianatra nanao fihetsiketsehana. Afaka manampy amin'ny fisorohana izany karazana loza izany ny fampiasana tifitra ranon-tsakay. Tsy te hanana olana vokatry ny fampiasana kobay ihany koa ny governemanta sy ny polisy . Koa tsy dia ilaina loatra ny adihevitra mikasika izany.
Nipetraka ny fanontaniana raha ankatòavin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena ny fampiasana ranon-tsakay na tsia. Nanambara ny Minisitry ny Atitany Mohiuddin Khan Alamgir  fa ankatòavin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena rehetra ny tifitra ranon-tsakay ary fitaovana fampiasa hisorohana ny fikomiana manerana izao tontolo izao. Na dia izany aza, namoaka filazana momba ny lalàna  ho an'ny governemanta ny mpisolovavan'ny Fitsarana Tampony izay nitaky fa tokony hitsahatra ao anatin'ny 24 ora ny fampiasana tifitra ranon-tsakay. Bilaogera Mehedi Hasan Khan  nanoratra hoe [bn]:
Re tamin'ny vaovao hariva fa nandefa filazana momba ny lalàna ho an'ny Governemanta ny mpisolovavan'ny Fitsarana Tampony izay mitaky ny fampitsaharana ny fampiasana ny tifitra ranon-tsakay ao anatin'ny 24 ora, ankasitrahako izy. Tsy hiverina intsony i Sekandar Ali. Nanome ny lesony farany tamin'ireo polisy ity mpampianatra ity tamin'ny famoizany ny ainy. Mbola hiandry loza maro hafa ve izy ireo?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/24/45046/
 Vao voalohany teo amin'ny tantaran'i Bangladesh, no : http://www.foxnews.com/world/2013/01/16/bangladesh-police-use-pepper-spray-to-disperse-activists-enforcing-strike-over/
 tifitra ranon-tsakay: http://en.wikipedia.org/wiki/Pepper_spray
 Minisitry ny Atitany Mohiuddin Khan Alamgir: http://www.prothom-alo.com/detail/date/2013-01-18/news/322430
 namoaka filazana momba ny lalàna: http://ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDFfMThfMTNfMV8xXzFfMTIzMzY=